Hisongadina… : 15 taona ry Rakoto Frah Junior | NewsMada
Hisongadina… : 15 taona ry Rakoto Frah Junior
Hanan-tantara eo amin’ny tarika Rakoto Frah Junior ity taona 2016 ity. Hanamarika ny faha-15 taona nijoroany izy ireo. Hatevina ny fandaharam-potoana efa nomanin’ny tarika amin’izany.
Hosokafana amim-pomba ofisialy, ny volana mey, izany fotoam-pankalazana izany. Anisan’ireo hetsika goavana indrindra, hotanterahina amin’io fotoana io, ny fitokanana ny lalana mitondra ny anaran-dRabezoza Rakoto Philibert, fantatry ny maro amin’ny hoe Rakoto Frah. Tsiahivina fa etsy Ambalavao Isotry, tsy lavitra ny trano fonenany fony fahavelony, no misy izany lalana izany.
Misongadina amin’ireo hetsika samihafa koa ny hisian’ny fampisehoana vakodrazana, isaky ny alahady, ary mandritra ny iray volana. Mbola ho fantatra, ao aoriana kely ao, ny toerana hanatontosana izany.
Etsy ankilan’izay, hampirantiana etsy amin’ny IKM etsy Antsahavola ny tantara sy zava-bitan-dRakoto Frah, miampy ireo sodina nentiny nitondra avo ny voninahitry ny zavakanto sy ny kolontsaina malagasy. Tsy ho ambakan’ireo koa ny an’ny taranany, ry Rakoto Frah Junior, izay hanana ny anjara toerany koa amin’io fotoana io.
Marihina fa mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra, ny volana aogositra 2016, no hanatanterahana ity fampirantiana ity, arahina fampianarana sodina maimaimpoana. Tanjona ny hisarihana ny ankizy sy ny tanora hahalala bebe kokoa sy hahay ity zavamaneno malagasy ity. Hofaranana amin’ny fitetezana iny tapany avaratry ny Nosy, hatrany Mahajanga, iny izao fanamarihana ny faha-15 taona nijoroan’ny tarika Rakoto Frah Junior izao.